WAR CUSUB: Nin Al-Shabaab ah oo la qabtay, kadib markii laga carooday dil uu ka geystay … | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: Nin Al-Shabaab ah oo la qabtay, kadib markii laga carooday...
Ceelwaaq (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxay gacanta ku dhigeen xubno si dhow loola xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada Ururka Al Shabaab, kuwaa oo iminka su’aalo la weydiinayo.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa xubnahan oo shan nin gaaraya ku qabtay Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, ka dib hawlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmadaasi.
Raggan gacanta lagu soo dhigay ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ku jiro ninkii soo abaabulay dil Sarkaal Ciidanka Xoogga Dalka ka tirsanaa, oo Talaadadii loogu gaystay agagaarka Suuqa Xoolaha ee Degmada Ceelwaaq.
Laba ka mid ah bastooladleyda Shabaabka ayaa 1-dii bishan waxay Degmada Ceelwaaq ku dileen Allaha u naxariistee Kabtan Saalax Canshuur Cali Barre (Salaaxudiin), oo ka tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Mid ka mid ah labadaasi nin ayaa dilka ka dib lagu dilay degmadaasi, iyadoona meydkiisa la soo dhigay Bartamaha Ceelwaaq, xilli muddo saacado ah uu yaalay. Kii kale ayaana ka baxsaday gacanta sharciga.
Afhayeenka Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo, Korneyl Aadan Axmed Xersi (Aadan Rufle) oo la hadlay mareegta Halqaran.com ayaa xaqiijiyay in raggaasi la soo qabtay maalintii Jimcaha.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxay sheegeen in ragga gacanta lagu hayo su’aalo la weydiinayo, waxay kaloo sheegeen in su’aalo weydiinta ka dib ay cadaaladda horkeeni doonaan.
Dilka Kabtan Salaaxudiin ayaa ka careysiiyay dadka deegaanka iyo Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka, waxayna bilaabeen hawlgalo ay isaga kaashanayan soo qab qabashada Shabaabka ku dhex dhuumaaleysanaya degmadaasi.
Si kastaba, Kabtanka ayaa ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee ilaaliya xuduuda, iyadoo lagu xusuusto sida weyn uu kaga soo horjeeday in Kenya ku soo durugto dhulka Somaliya.
kadib markii laga carooday dil uu ka geystay
Nin Shabaab ah oo gacanta lagu dhigay